ပီအာရ်နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုခြင်း( ရွှေကူမေနှင်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပီအာရ်နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုခြင်း( ရွှေကူမေနှင်း )
ပီအာရ်နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုခြင်း( ရွှေကူမေနှင်း )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Sep 2, 2014 in Creative Writing, Think Different | 16 comments
စာဖတ်ပရိသတ်အများစုက ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားနေကြချိန်တွင် ကျွန်မကား ပီအာရ် ဘယ်အခြေ အနေရောက်နေပြီနည်းဟု စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေပါသည်။
ယခုနောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းအရ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်သည် စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှအပ နေ့စဉ် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေအထိ စည်းဝေးနေကြောင်း၊ ခွင့်ယူခြင်းကိုပင် မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်း၊ ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုအရှိန်ရနေကြောင်း သိရ၏။ ၎င်း ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းအဆင့်မှာ သုံးဆင့်ရှိပြီး ပထမအဆင့် မိမိတို့အတွင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် အစီရင်ခံစာရေးခြင်းတို့ဖြစ်၏။
ကော်မရှင်၏အလုပ်လုပ်ချိန်ကို ရက်ပေါင်း ၆၀ သတ်မှတ်ထားရာ အောက်တိုဘာလဆန်းတွင် အပြီးသတ် ထုတ်ပြန်ရန် ဖြစ်သည်။ ဤစာရေးသူသည် နိုင်ငံရေးစနစ်ကို စိတ်ဝင်စားသော စာရေးဆရာတစ်ဦးအဖြစ် (ကော်မရှင်က မဖိတ်ကြားစေကာမူ) အကြံပြုရန် စိတ်အားထက်သန်သဖြင့် ဤအကြံပြုစာကို ရေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ မြန်မာပြည်သူများထဲတွင် ပီအာရ်နှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်စု သုံးစုရှိသည်ဟု မြင်ရသည်။
ပထမအုပ်စုမှာ ဤစနစ်ကို အင်န်ဒီအက်ဖ်မှ တင်ခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်ရေးမှ ထောက်ခံခြင်း၊ အင်န်အယ်လ်ဒီမှ ကန့်ကွက်ခြင်း တို့ကြောင့် မိမိတို့လည်း ကန့်ကွက်ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြသူများဖြစ်၏။ ‘အချိုးချ’ ဟူသောစကားအရ မိမိတို့ကြိုက်သောပါတီ၊ သေချာပေါက်နိုင်မည်ထင်ထားသော ပါတီက အပြတ်နိုင်လျှင်လည်း အနည်းပါတီများကို မျှဝေပေးရမည်ဟု ယူဆကာ ကန့်ကွက်ကြ သူများဖြစ်၏။
ဒုတိယအုပ်စုက အချိုးချစနစ်အရ ပါတီငယ်များလည်း လွှတ်တော်သို့ ရောက်နိုင်သည်ဟု ယူဆကာ အချိန်မီနိုင်ငံရေးပါတီ ထောင်ရန် စိတ်ကူးကြသူများဖြစ်၏။
တတိယအုပ်စုကား ပီအာရ်ကို လုံးဝစိတ်မ၀င်စားသူများဟု ဆိုရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲရောက်လျှင် မဲပေးချင်ပေးမည်။ မပေးဘဲနေချင်နေမည်။ မည်သူတက်တက်၊ ကိုယ်ရှိမှ ကိုယ်စားရတာဟု သဘောထားသူများတည်း။
ဤအကြောင်းများကြောင့် ပီအာရ်ကို ပြည်သူအားလုံး သဘောပေါက်အောင် ရှင်းဖို့လိုပါသည်။ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များတွင် ပီအာရ်အကြောင်း အကောင်းရေးသူနည်းပြီး၊ စုတ်ပြတ်အောင် ရှုတ်ချသူများသည်။ အချို့က ပထမအုပ်စုမှ ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်သတ် ရေးကြခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ ပီအာရ် ဖန်တီးသူများအား ပုဂ္ဂိုလ်အရ ပုတ်ခတ်ခြင်းဖြစ်၏။ ဖတ်မိသူများက အမှန်ထင်သွား လျှင် ‘စနစ်’ နစ်နာမည်။
အမှန်မှာ ပီအာရ်စနစ်သည် ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ဖြစ်၏။ ဒီမိုကရေစီ၏ စံနှုန်းက အများသဘောကို လိုက်နာမည်၊ အနည်းဆန္ဒ ကိုလည်း လေးစားရမည်ဟုဆိုထားသည်။ ထိုအခါ ရွေးကောက်ပွဲ၌ အမှတ်အများဆုံးရသူကို အနိုင်ပေးပြီး နည်းသူက လုံးဝအရှုံး ဖြစ်လျှင် ‘အနည်းဆန္ဒ’ ပါတော့မည်မဟုတ်ချေ။ များခြင်းနှင့်နည်းခြင်း ကွာခြားချက်ကိုလည်း တွက်ရန်လိုသည်။ ဥပမာ-မဲ ၃၀၀၀ နှင့် ၂၅၀၀ ဆိုပါစို့။ ၃၀၀၀ သည် အများဆုံးဖြစ်၏။ သို့သော် ၂၅၀၀ ဆိုသော မဲကလည်း မနည်းလှပါ။ ၃၀၀၀ ကိုသာ အနိုင်ပေးလျှင် ၂၅၀၀ မဲများ အလဟဿဖြစ်တော့မည်။ အနည်း၏ဆန္ဒ လုံးဝမပါတော့ပေ။
ဤတွင် ‘အချိုးချ’ ဆိုရလျှင် ၀င်ရွေးသော ပါတီတိုင်းအမတ်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ရွေးသောပါတီတိုင်းရမည်ဆိုလျှင် ပိုက်ဆံ စိုက်ပြီး လွှတ်တော်ဝင်ကြလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင် အချိုးကို မည်သို့ချမည်နည်း။
ဤကိစ္စကို ကြပ်ကြပ်သတိထားစဉ်းစားရန် လိုသည်။ စာမေးပွဲဖြေသကဲ့သုိ့ အနည်းဆုံးအောင်မှတ် သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ-၄၀ ရာခိုင်နှုန်းရမှ အောင်မည်ဆိုတာမျိုးဖြစ်၏။ ရာခိုင်နှုန်းတွက်ရာတွင်လည်း ‘မဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ’ ကို ယူ၍ မဖြစ်ပါ။ ဆန္ဒမဲ မပေးသူများကို ထည့်တွက်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။ ‘မဲပေးသူဦးရေ’ ကိုသာတည်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းတွက်ရပါလိမ့်မည်။ မဲပေးသူ တစ်သိန်း ဆိုပါစို့၊ ခြောက်သောင်းရသူသည် အများဆုံးရသူဖြစ်လျှင် သူ့နောက်မှ သုံးသောင်း၊ နှစ်သောင်း စသဖြင့် တန်းစီရမည်။ ငါးပါတီ အထိ စီမည်လား၊ ခြောက်ပါတီအထိလား စဉ်းစားရန်မလိုပါ။ အနည်းဆုံးရာခိုင်နှုန်းကိုသာ ကြိုတင်သတ်မှတ်ရန်လိုသည်။ အနည်းဆုံးရာခိုင်နှုန်းရမှတ်ကို မီလျှင် အချိုးချ အမတ်အရေအတွက်ထဲပါမည်။ အနည်းဆုံး ရာခိုင်နှုန်းကိုမှမမီလျှင် ထည့်စဉ်းစားရန် မလိုပါ။ လုံးဝ အရှုံးဟု ဆိုရမည်။
သို့သော် အမှတ်တွက်ရာ၌ မြို့နယ်တစ်ခုစီ မဟုတ်ပဲ တိုင်းအလိုက် စုပေါင်းရပါမည်။ သို့မှသာ ပါတီတစ်ခုချင်းစီက တိုင်းတစ်ခုအတွင်း စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုရရှိကာ ၎င်းကိုစုစုပေါင်း မဲပေးသူအရေအတွက်ဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအချို့ကို တွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အနည်းဆုံးရာခိုင်နှုန်းရသော ပါတီအထိ ဖြတ်လိုက်ရန်ဖြစ်၏။ နောက်ဆုံးအဖြေမှာ အချိုးအစားအရ အမတ်ဦးရေ ရလာပါလိမ့်မည်။ ထိုဦးရေအရ ပါတီများက ပါတီတွင်း ပြန်ခွဲဝေပေးရန်ဖြစ်၏။
ဤနည်းကို ‘ရှုပ်’ သည်ဟုထင်လျှင် ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းရှိပါသည်။ အချိုးချအမှတ်တွက်သော ကော်မရှင်တွင် ပါတီတိုင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ပြီး အားလုံးမျက်မြင်တွင် တွက်ချက်ဖို့လိုပါသည်။ လုပ်ရင်းဖြင့် လွတ်သွားပါလိမ့်မည်။
အဓိက အကျိုးကား မဲအနည်းငယ်ဖြစ်စေ၊ မဲ အပြတ်ဖြစ်စေ၊ နိုင်သူက အနိုင်ရပြီး မဲနည်းနည်းသာကပ်ပြီး ရှုံးသူဟူ၍ ဖြစ်မလာနိုင်တော့ခြင်းတည်း။
မဲများသူလည်း သူ့ရာခိုင်နှုန်းအလိုက်ရမည်။ နည်းသူများလည်း သူ့ရာခိုင်းနှုန်းအလိုက်ရမည်။ လွှတ်တော်ထဲတွင် တစ်ပါတီ တည်းက အသားစီအနိုင်ယူခြင်း မရှိနိုင်တော့ချေ။ ပါတီစုံရောက်ရှိကာ အသံစုံ၊ ဆန္ဒစုံ၊ သဘောထားအစုံ တင်ပြနိုင်ကြမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ရာ လွှတ်တော်ထဲတွင် ထပ်မံစည်းရုံးခွင့်ရရှိပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ‘ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်’ ထွန်းကားတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ။
( ရွှေကူမေနှင်း – ၂ – ၉ – ၂၀၁၄ စံတော်ချိန်သတင်းစာ )
ကျတော်အနေနဲ့က ပီအာစနစ်ကို အကြိုက်ကြီးလဲမဟုတ်သလို
အထူးသဖြင့် ပြည်သူ့မဲမပါပဲ လွတ်တော်ထဲ ကြိုတင်နေရာ
ရယူထားတဲ့ ၂၅% တမတ်သားကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီစာက အမေ့အမြင်ပါ ၊
လွတ်လပ်စွာ သဘောထားအမြင် မတူညီမှုတွေကတော့ ရှိနေရမှာပါ ၊
“PR,ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိပါဘူး ဆိုတဲ့သူတွေ နားလည်အောင် ရှင်းပြရရင် အဲ့ဒါကြီးက ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မှာ သုံးခဲ့တဲ့ကြိုတင်မဲ နဲ့ အတူတူပဲ။ မဲရှုံးတဲ့သူတွေကို လွှတ်တော်ထဲ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ရောက်အောင်ပြန်ခေါ်သွားတဲ့ နည်းတစ်နည်းပဲ။ အစကတည်းက အချိုးမကျအောင် အစိတ်သား အသာယူထားပြီးမှ အချိုးကျစံနစ်သုံးမယ်ဆိုတော့. ကိုယ်ကနုံတာ မဟုတ်ရင် သူတို့က တော်တော်နုံတာပဲနော်။ အံ့ပါရဲ့ အံ့ပါရဲ့။”
(ဘောင်းဘီချွတ်ပြလိုက်ရုံနဲ့ ဟယ် ငါတို့လိုပဲ အရပ်သားကြီးပါလားလို့ထင်နေရင် နောက်တစ်ဂိုး ထပ်ရှုံးမှာ)
ဦးစိုးးမင်းးး ပြော တာ ကို ပြတာ။
ပီအာ ကြီးးး ပျံလန် အောင် ကောင်းး ရုံ မက
ပီအာ့ ဘိုးးအေ စံနစ်ကို သုံးးချင်လည်းးး ဒီ အစိုးးရ ထောက်ခံ လို့ ကို ကန့် ကွက်ပါတယ်။
သူတို့ လုပ်ချင်သမျှ မယုံလို့ ဟို့ ဟို့…..
သူတို့ အားးပေးးးတဲ့ ကိစ္စက သူ တို့ သက်ဆိုးးးရှည်ဖို့ အထောက်အပံ့ချည်းးးးး
မမ ငါးရက်လောက် ၀င်မမန့်ပဲပျောက်နေတယ်..ဘယ်ရောက်နေလဲဗျ…ခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်… PR ကြောင့်လား..အဟီးဟီး
Post လေးအတွက် ကျေးဇူး ပါ ကိုမျိုး ရေ။
အခု နဂို ကမှ ဟိုယောင် ဒီယောင် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူ တွေ ကို ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်စေဖို့ နောက် ထပ် PR တစ်မျိုး ကို အသက်သွင်း နေပြီ။
နိုင်ငံခြားသား တွေထဲ က အမြဲတန်းနေထိုင်ခွင့် (Permanent Residence – PR) စ လျှောက်လို့ ရပြီ ဆိုလား။
ဒီတော့ လူ တွေ ကို ဟို ပီအာ နဲ့ ဒီ ပီအာ ရောချ လို့ ရသပေါ့။
၂၀၂၀ လောက်ဆိုရင်တော့ ကောင်းစပြု လာမယ် လို့ ထင်ပါကြောင်း
ဒီလိုအချိန်မျိုးမယ်.. ကိုယ့်အချိန်ကုန်ခံ.. ဦးနှောက်အပူခံ..တွေးနေ..စဉ်းစားနေ..လုပ်နေရန်မလို… ပရိုဖက်ရှင်နယ်ကို.. ညွှန်းဆိုနောက်လိုက်ရတာပါ…
ပရို… ဆိုတာ.. ဒီအတွက်ရှိတာပါ…။
ဒီ တစ်ခါ ဒီ သူကြီးမင်း စကား ကို အလေးအနက်ပြု လိုက်နာပါ့မယ်။ :-))
အာဏာရှင်စစ်အစိုးရက ယူနီဖောင်း(ဘောင်းဘီ) ချွတ်ပြီ အရပ်သားအစိုးရလုပ်တယ်၊ အဲဒီအရပ်သား အစိုးရလုပ်စက အသွင်ပြောင်းသမ္မတကြီးကောင်းသလိုထင်ကာ ပြည်သူထောက်ခံမှုခဏရခဲ့တယ်၊ ကြာလာတော့ သူတို့အမူအကျင့်အတိုင်း လုပ်လေတော့ အခု ပြည်သူထောက်ခံမှုလျော့နည်းလာတယ် အဲဒီအချိန်မှာ အာဏာရပါတီက ယှဉ်ပြိုင်ဘက်ကို ကြာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့ရလာဒ်အရ တုန်လှုပ်သွားတယ်၊ အဲလိုကြောင့် တမတ်အသာစီးရပေမယ့် ကြောက်ကန်ကန်လာတဲ့သဘော လုပ်လာရင်းက အခု ပီအာ ကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားဖို့ ကြံရွယ်လာခဲ့တာပါဘဲ။
ပီအာ စနစ်က မကောင်းဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး ရာနှုန်းပြည့်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့ တိုင်းပြည်တွေအတွက် ပီအာ စနစ်၏ ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ နဂိုကထဲက ရာနှုန်းမပြည့်ဘဲ အလေးခိုးပြီးချိန်တဲ့ ချိန်ခွင်ကို သမာဓိချိန်ခွင်လို့ ကျုပ်တော့မျက်စိမှိတ်ပြီး မပြောချင်ဘူးဗျာ။
ပီအာ စနစ်ကို ကြားရုံးကြားဖူးပြီး ဘာဆက်ဖြစ်နေမှန်းတောင် မသိဝူး။
အိုက်ဂလို နည်းနဲ့ အတည်အခန့် ဥပဒေတွေ ရေးဆွဲနေတာလဲ မနည်းတော့ဝူး။
ဘာပုလို့ လွှတ်တော်ထဲက ကိတ်စတွေက ပြည်သူတွေ မသိလိုက်ခင် အဖြေထွက်သွားတာလဲ သိရင်ပြောပေးကြပါအုံး
ခံစားရလွန်းလို့ ပြောချင်လို့။ ;-)
ဥမပါ ပြောရရင် ရွှေအိ ရယ် ….
ဘယ်နေရာမှာ ဘာလုပ်မယ်လို့ လွှတ်တော်ထဲ (သို့) ဆိုင်ရာအစည်းအဝေး ထဲ က သတင်းများ ကို လွှတ်တော် (သို့) အစည်းအဝေး ကျင်းပနေဆဲမှာပင်
အပြင်က ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ရတဲ့ ပြည်သူများ ဆီ ပို့ ပေးလိုက်သမို့
တစ်ခြား ပြည်သူများ အားလုံး လဲ သိပြီး ဖြစ်ပြီ လို့
ယူဆနိုင် လို့ပါတဲ့ ကွယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ အစည်းအဝေးထဲ က လူတွေ ဆုံးဖြတ်တောင် မချ ရသေး …
အပြင်မှာ အဲဒါနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဈေးများ ကစားပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီလို up-to-date သတင်းရောင်း သမားများ
လွှတ်တော် ထဲ ပိုပိုပြီး ဝင်နိုင်ဖို့
ပီအာ စနစ် ကို အတင်းကာရော သုံးချင်နေကြခြင်းပါ။
Ethics ရှိတဲ့ လူတွေ ဝင်နေပြီး စနစ်မှာ ပီအာစနစ် ကောင်းချင် ကောင်း ပေမဲ့
Ethics မရှိသေး တဲ့၊ Ethicsကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ လူ တွေ ကြီးစိုးတဲ့ မြေမှာ
သူတို့ အတွက် ဥပဒေ လဲ မရှိတာမို့
လူ မကောင်း တွေ ကို လွှတ်တော်ထဲ ဝင်နိုင်ဖို့ ဒီလို ပီအာ ကို သုံးပါမယ်။
ဒါကိုမှ မရှင်း မရှင်း ဖြစ်ဖြစ်နေရင်လဲ
ဒီ Ethicsမရှိတဲ့ လူ တွေကိုဘဲ ခေါင်းဆောင်စေပြီး ကံစီမံရာ ခံကြတာပေါ့ လို့ သာ စိတ်ဖြေနေကြဖို့ပါဘဲ။
အန်တီ ရေးထားတာကို ကန့်ကွက်တာ မကောင်းပြောတာ မဟုတ်ပါ ကိုမျိုး ရေ။
ဒီ စနစ် ကို ဘန်းပြပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာမဲ့ သူတွေ ရှိပြီး ဖြစ်နေတာ မို့ပါ။
တကယ်လဲ စီးပွါးရေးသမားများ သတင်းဦး ရဖို့ လက်ရှိမှာ လက် တွေ့ ကျင့်သုံး နေသော နည်းဖြစ်ပါတယ်။
.. ပညာကိုယုံပါတယ်၊ လူကိုမယုံတာပါဆို သလိုမျိုး .. ပီအာရ် စနစ်ကိုကြိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီစနစ်ကို အသက်သွင်းမယ့်လူတွေကိုတော့ မကြိုက်ဘူး.. ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုတော့ ဒီလိုပဲကိုယ့်ဘက်အားသာမဲ့ စနစ်တွေကိုကြံဖန်ကြတာဆိုတော့ ပြောရခက်သားပဲ.. NLD အနေနဲ့လည်း သူ့ကိုအတားအဆီးဖြစ်စေတဲ့ပုဒ်မတွေကို ပြင်ချင်သလို ပြည်ခိုင်ဖြိုး နဲ့ တခြားပါတီငယ်တွေကလည်း သူတို့ အတွက်နေရာကျန်မယ့် PR ကိုလုပ်ချင်နေကြတယ်.. အပေးအယူသဘောမျိုးညှိကြရင် အဆင်ပြေမလားမသိ (လွယ်လွယ်တွေးကြည့်တာ).. PR၊ အစိတ်သား၊ ဒေါ်စုကို ချုပ်ထားတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ ၂၀၁၅ မှာ NLD နာမည်ကြီးထမင်းငတ်ကိန်းတော့ မြင်နေရပြီ..
သူ့စနစ်နဲ့သူအောင်မြင်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ် သိနိုင်ပါတယ်
စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်သူ အကောင်အထည်ဖော်ပုံ လိုက်နာကျင့်သုံးသူတွေအပေါ်မူတည်ပြီး